Sarimihetsika :: Handefa horonantsary malagasy ny Cinépax • AoRaha
Tantara roa samy novokarin’ny mpantontosa malagasy no halefan’ny Cinépax, toerana fijerena sinema etsy Ambodivona, amin’ny 13 marsa 2020. Hifandimby handeha amin’io fotoana io ny sanganasan’i Lova Nantenaina mitondra ny lohateny hoe « Ady Gasy » sy « Zanaka, Teny nomen’i Felix ». Maro ny firenena sy sehatra iraisam-pirenena efa nitondran’i Lova Nantenaina an’ireo vokatra ireo. Hahazo tombony kokoa ny mpitia sarimihetsika eto amintsika satria sambany no hahita amina toerana tokana an’ireo tantara ireo.
Maneho ny andavanandron’ny Malagasy mivelona amin’ny asa tanana madinika ny « Ady Gasy ». Miainga amin’ny fikirakirana ny zavatra efa nampiasaina, toy ny fanamboarana kiraro amin’ny alalan’ny kodiarana, famadihana ny taolan’omby ho lasa fanafody sy savony. Tsy misy very ny zava-drehetra fa hahodina ho azo ampiasaina indray. Hita ao ihany koa ny akon’ny krizy ara-toekarena maneran-tany aty amin’ny tany mahantra toa an’i Madagasikara. Maharitra 84 minitra ny sarimihetsika ary amin’ny fiteny malagasy.
Horonantsary fohy mampatsiahy ny tolona tamin’ny 29 marsa 1947 ny “Zanaka, Teny nomen’i “Felix”. Sivy amby roapolo minitra ny faharetany. “Misy mikatsaka izay hampaharitra ny fanjanahantany. Aoka ny Malagasy rehetra hiteny hoe tsia, lavinay marindrano, na iza na iza voanjo”, hoy ny teny nomen’i Felix Robson, mpitolona mavitrika tamin’ny “raharaha 47”. Ireo no voarakitra ao anatin’ny famintinana ny tantara.
Fahafatesana tao anatin’ny hirifiry :: Nitondra takaitra mandra-maty ity zazavavy nianjera tany an-tsekoly